Nampiasa rindrin-trano fanodinana rindrina i Rosia
Malagasy Nampiasa rindrin-trano fanodinana rindrina i Rosia
Ny ravina vita amin'ny ravin-taratasy misy rindrina dia manana endrika mahafinaritra sy loko mamirapiratra. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny zaridaina, orinasa, toeram-ponenana, hotely, trano fampirantiana, vakansy, trano efa misy ary trano maoderina.
Toeram-pivarotana volom-borona vita amin'ny rindrina miloko volom-borona vita amin'ny varotra vy mivarotra mivantana indrindra any Rosia, kgyzstan, Uzberkistan ary firenena maro. Tian'izy ireo ny takela-by vita amin'ny C8 T8 ho an'ny trano fonenana.
Ny rindrina iombonana miavonavona miloko volom-borona mialoha ny famolahana ny bobaka dia 1250mm, ny fampiasana ny fitaovana vita amin'ny alàlan'ny vy ao amin'ny PPGI.
Ny rindrina feno rindrina vita amin'ny ravin-taratasy miloko volom-borona vita amin'ny rindranasa dia ahitana ny decoiler, milina famolavolana milina, rafitra fanaraha-maso ary ny latabatra.